कलिला केटाकेटीले हुक्का तान्दै, आकाशतिर धुँवा फाल्दै र चर्को स्वरमा बजाएको अंग्रेजी रक गीत सुनेको देख्दा पसल मालिकलाई त ‘कुल’ लाग्यो होला । मलाई भने विकृत लाग्यो ।
पहिले ठेलामा या सानो पसलमा खोलिने चिया पसल अचेलअत्याधुनिक सेवा– सुविधासहित खुल्न थालेका छन् । विराटनगरमा खुलेको दाजुको चिया पसल सजावट र अवधारणामा फरक छ । मध्य फागुनको एक साँझ चिया पसल पुग्दा ९ देखि १२ सम्म पढ्ने केटाकेटीको भीड देखियो । चियाका साथमा चाउमिन, बर्गर, पिज्जालगायत भेराइटी पाइदो रहेछ, त्यहाँ ।
पसलको एक भित्तामा बुद्धको चित्र कुँदिएको थियो । अर्को भित्तामा माटोको ससाना कप सजाएर राखिएका । कपमा मान्छेको नाम हस्ताक्षर गरेको थियो । हेर्दा कफी विथ करणबाट प्रभावित भएजस्तो लाग्ने । चिया पसलमा कक्षाकोठा थियो, जहाँ कसैलाई चिया खाँदै केही लेख्न मन लाग्यो भने कालोपाटीमा लेख्न मिल्ने । पसल मालिक अस्ट्रेलियाबाट फर्केका हुनाले उनको नयाँ कन्सेप्‍टमा चिया पसल खोलेका रहेछन् ।
तर दु:खको कुरा चिया पसलमा हुक्का पनि पाइँदो रहेछ । कलिला केटाकेटीले हुक्का तान्दै, आकाशतिर धुँवा फाल्दै र चर्को स्वरमा बजाएको अंग्रेजी रक गीत सुनेको देख्दा पसल मालिकलाई त ‘कुल’ लाग्यो होला । मलाई भने विकृत लाग्यो । धूमपानलाई यसरी बढावा दिन मिल्छ ?
हिउँ खेल्ने र पाथीभरा माताको दर्शन गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङलागियो । विराटनगरदेखि ताप्लेजुङसम्मको यात्रा क्रममा थुप्रै विद्यालय भेटिए । विद्यार्थीहरु खाजा खाने समय सडकपारि बसेर गँफिदै रमिरहेका थिए । ठूला–साना गाडी गुडिरहने ठाउँमा कक्षा १ देखि १० सम्मकै बालबालिकाको सहज चहलपहल देखेर मलाई भने डर लाग्यो । गाडी बेस्सरी कुदाउँदै आए या विद्यार्थी कुद्दै जाने हो भने दुर्घटना सजिलै हुन सक्‍ने । अझ ब्रेक फेल भए वा चालकले लापर्बाही गरे गाडी सीधै विद्यालय हातामै पुग्‍ने ।
सामान सहज पुर्‍याउने हिसाबले सायद सडक छेउमै विद्यालय खोलेका होलान् । तर सडकमै विद्यालय हुँदा विद्यार्थीको ज्यान कति जोखिममा पर्ला ? ठूला विद्यार्थी आफूलाई सुरक्षित राख्लान् तर साना बालबालिकाको हालत के होला ? दिनहुँ जोखिमपूर्ण यात्रा गरी विद्यालय आउजाउ गर्नुपर्दा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कस्तो होला ?
इलाममा पानी परेपछि दिउँसै तुँवालोले छोप्दो रहेछ । यस्तो अवस्थामा सडकको यात्रा कति जोखिमपूर्ण होला ? गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार आएको छ । यस्ता स–साना कुरा पनि ध्यान नदिने हो भने सरकार किन चाहियो ?
जति नै योजना बनाए पनि यात्रा कहिल्यै सोचेजस्तो हुँदैन । सहरमा सुविधामा बस्‍ने बानी परिसकेका हामी गाउँ जाँदा पनि उस्तै सुविधा होला भनी सोच्छौँ । घुम्‍न हिँड्दा हामी पर्यटक बनिदिन्छौँ । सक्दो सुविधा चाहिन्छ, चाहे बाटोमा बास बस्‍ने होटल होस् वा गन्तव्य स्थल ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा पुग्‍नुअघि सुकेटार आउँछ । सुकेटारमा भव्य होटल छन् र एयरपोर्ट पनि । त्यसपछि तल्लो फेदीसम्म ठूलो बाटो छ तर कच्ची । सुक्खायाममा धुलो उडेर वाक्क बनाउँछ भने पानी परेपछि हिलोले वारपार गर्नसमेत मुस्किल । दिउँसो पानी परेकाले बाटो हिलाम्मे थियो । हिलोमा बाइक चलाउन नसकेर लडेपछि हामी देउराली होटलमा बास बस्यौँ । ठाउँको नाम पनि देउराली रहेछ । काठले बनेको घरको छानो भने जस्ताको थियो । होटलमा बत्ती थियो ।
७ बजे नै सुत्‍ने सुरसार कस्‍ने ठाउँमा होटल साहूनी विष्णु थापाले खाना पकाउने भइन् । दाल, भात र साग खाँदै उनीसँग देउरालीका बारे बुझ्ने कोसिस गर्‍यौँ । वरिपरि सबै होटल रहेछन् । उनी बस्‍ने पारिको गाउँमा पहिरोले घरखेत लगेपछि आफन्तको घर देउरालीमा १ लाख दिएर बसेकी रहिछन् । एउटा छोरा विदेश, अर्को छोरा झापा र अर्को छोरा ताप्लेजुङ नै बस्दा रहेछन् । होटलमा पानी नआउने भएकाले लिन १ घन्टा पर जानुपर्दो रहेछ । लुगा धुन सुकेटार पुग्नुपर्दो रहेछ । देउरालीबाट सुकेटार २ किलोमिटर टाढा पर्छ ।
धन्‍न, सिरकको खोल र तन्‍ना सफा नै पायौँ । हिउँपानी जस्तामा पर्दा घरभित्रै छिर्दो रहेछ । काठमा देखिने पानीका दागले विष्णुलाई दिक्क लाग्दो रहेछ । ३ वटा सिरक खप्टेपछि जाडो भने लागेन । तर बिहान उठ्दा हातमुख धुने पानी पनि पाइएन । न्यूनतम सुविधाबिना पनि मानिस बाँचिरहनु परेको देख्दा खल्लो लाग्यो ।